SAWIR IYO SHARAXAADDA NOOCYADA UGU WAAWEYN EE CATALPA - SOOSAARKA DALAGGA
Catalpa: sharaxaadda iyo sawirada noocyada caamka ah
Magaca geedka ma yaqaanno qof, laakiin geedka laftiisa ayaa loo yaqaanaa qof kasta oo horey u joogey koonfurta. Catalpa - geed oo si weyn ugu kora xeebta Badda. Kuwa halkaas u yimid xagaaga, waxay ku qaadi karaan ubaxyada. Dhammaadka bisha Juun, waxaa lagu daboolay maro farabadan oo ubaxyo leh oo gudaha ah. Wixii iyaga ah, geedka ayaa sidoo kale loo yaqaan jimicsi xagaaga.
Batalonia Batalonia waxay nagu timid naga timid waqooyi bari ee waqooyiga Ameerika, halkaas oo ay ku koraan dalagyada webiyada iyo kaymaha daadsan. Wuxuu jecel yahay ciidda waa acidic, laakiin waqti isku mid ah waa daruur iyo qoyan. Waxay leedahay nidaam xidid oo qoto dheer, aad u xasaasi ah si ay u waxyeeleeyaan. Waxay ku koraan ilaa 10 m dherer ahaan. Caleemaha waxaa loo qaabeeyey qaab jilicsan, oo sameysma taajkii asymmetric ah. Waxaa la daboolay weyn, ilaa 20 cm caleemo wadnaha-qaabeeya, kuwaas oo markii hore leeyihiin midab cirro ah cufan, iyo ku dhowaad ubax - cagaaran. Inta lagu jiro ubaxyo ubaxyo ubaxyo huruud ah-caddaan illaa 30 cm leh lakabka dambiilaha gudaha. Dhammaadka ubaxyada, miraha miraha ilaa 40 cm dheer muuqan on, taas oo dhamaadka xilliga xagaaga soo jeedin doonaa brown. Dhulkana dhaxan marka hore. In cirqiyaaladayada oo baahsan, taas oo loo yaqaano catalpa caadiga ah.
Waa muhiim! Inta badan noocyada caanka ah ee waddankeena waxay joogteynayaan dhaxan -35 ° C iyo xitaa hoose, laakiin caabbinta barafka waa in la sameeyaa si tartiib tartiib ah. Labadii sanno ee ugu horreeyey, geed geedo laga soo kobciyo koonto ma laha waqti ay ku dhistaan ​​qoryo cufan iyo inta badan kiiskana waa la qaboojiyaa.
Catalpa "Nana" oo dhererkeedu gaaro 6 m, kaas oo sameeya taajkii cufan ee cufan ee faafin laamaha, oo lagu daboolay jilif khafiif ah oo khafiif ah oo cagaar ah iyo caleemo cagaaran oo cagaaran. Ha barakoobin oo si tartiib ah u koraan. Wuxuu jecel yahay dhoobo cusub, siiriyaal iyo bacrimiyey. Noocan si xun ula wareegista kuleyl xoog leh iyo biyo la'aan, sidaa daraadeed waa in ay ahaataa mid aad u badan oo inta badan la waraabiyo. Marka koraan caleemaha, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in laamaha u ma dulqaadanayo manjooyin iyo u nugul dhaawaca. Isla sidaas oo kale nidaamka xididka, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u xakamayso dhulka ku hareeraysan oo isku day inaadan dib u soo celin si aan loo baahnayn. Waxaa loo isticmaalaa beeritaanka hal-abuura beeraha jardiinooyinka, jidadka, iyo sidoo kale kooxaha sida geedo qurxin ee beeraha.
Waxaan kugula talineynaa in aad barato noocyada kala duwan ee ash, maple, linden, acacia, sir, iyo kedar.
Noocyada ayaa yimid dhulkeena Waqooyiga Shiinaha, sidaa daraadeed, waxa ay heshay magaca labaad ee "Manchurian catalpa". Magaca rasmiga ah ayaa laga helay magacyada xiddiga Jarmalka Alexander Bunge. Sanadihii 1830-1831, wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee Yurub ah ee soo ururiya shay qoryo ah intii lagu jiray duufaantii Aasiya.
Catalpa ee noocan ah waxaa lagu sharaxay taajkii piramidal. Caleemaha saddex geesoodka ah ama qotomiska ah waxay leeyihiin salka hoose oo qaabaysan, mararka qaarkood ilkaha fiiqan dhinacyada. Caleemaha qashinka ah waxay leeyihiin hoos hoos mugdi ah oo cagaar ah oo iftiimaya meel u dhow petioles. Petioles gaari dhererka 8 cm, iyo caleemaha naftooda - 15 cm. Inflorescences koraan ilaa 3.5 cm dhererka, tagaya ubaxyo 3-12 cad corymbose leh dhibco guduud ah. Ka dib markii ay miraha ubax ay u muuqdaan ilaa 25 cm dherer. Catalpa waxay u baahan tahay taxaddar taxaddar leh, si tartiib ah ayey u koreysaa, waqooyiga waddanka waxay ku qaboojin kartaa heerka barafka.
Ma taqaanaa? Noocyada ugu badan ee catalpa waxay ku koraan kaymaha kulaylaha Cuba, Jamaica, iyo Haiti. In ciriiri qabow, lix nooc ayaa ku baxa duurjoogta duurka, afar ka mid ah Shiinaha, iyo laba kale oo ku yaal Maraykanka.
Aragtidu waxay si fiican u qabsatay hareeraha dhexe, iyagoo koraya ilaa 10 mitir. Qaadso tuunbiyada tooska ah taajka guud oo leh caleemo aad u ballaadhan ilaa 25 cm. Bartamihii July, waxaa lagu daboolay ubaxyo farabadan oo ah midab cad ama midab buluug ah oo jilicsan oo jilicsan iyo lakabyo bunni ah.
Ubaxa wuxuu soconayaa laba usbuuc illaa bishii taas oo ku xiran gobolka koritaanka. Dhamaadka miraha ubaxu waxay u muuqdaan - midabyo dhaadheer ilaa 40 cm, waxay ku sii jiraan geedkii illaa guga, laakiin waxay u bislaadaan bisha Oktoobar. Catalpa aad u fiican wuxuu leeyahay noocyo leh caleemo qaas ah, caleemo yar yar, oo loo yaqaan "pulverulent.
Noocaankan waxaa lagu sharraxay dhammaan wixii ka dambeeyay 1921, waana mid u eg sida noocyada xanuunka. Tani waa geed yar ilaa 5 m dhererka, laakiin marar badan ayaa geedaha ka baxa kaymaha kaymaha buuraha ama qulqulaha dherer ahaan 2400-2700 m oo ka sarreysa heerka badda. Goobta dabiiciga ah waa waqooyiga galbeed ee Gobolka Yunnan iyo koonfur-bari ee Tibet.
Qodobka dheer, dhaadheer wuxuu ka baxaa jaaniska hoose, ka soo koreeya xagga kore waxay leeyihiin cagaar cagaaran oo madow. Size - 22-25 cm ee width iyo dhererka. Inflorescences aan lahayn timo, aad u weyn (25 cm), corymbose-argagax. Ubaxyada iyaga ku koraya ilaa 5 cm dhexroor, waxay leeyihiin midab huruud ah-caddaan iyo dhibco guduud ah. Kusoo dhawow qeybta hore ee xagaaga. Dhamaadka miraha cylindrical ubax waxay u muuqdaan ilaa 1 cm ee dhexroorka iyo 30 cm dherer, dhuuban iyo xoqin ilaa dhamaadka. Waxay ka kooban yihiin miraha geedaha ilaa 2.5 cm.
Haddii aad go'aansato inaad qurxiso aagga beerta leh xoornooyinka ornamental, fiiro gaar ah u noqo spirea, naqshadda cadarka, hydrangea, kerriju, honeysuckle, cotoneaster, barafka, barberry, forsycia.
Mid ka mid ah noocyada ugu wayn ee catalpa. Geedku wuxuu koraa 30 m oo dherer ah oo ku yaal deegaankiisa dabiiciga ah - koonfurta galbeed ee Shiinaha, gobollada Yunnan, Sichuan, xitaa gobollada kulaalayaasha. Badiyaa waxay ku koraan buuraha. Caleenta dhirta waa mid dhexdhexaad ah - 12 cm ballaaran iyo 20 cm dheer. Dhaqan ahaan, noocyada ayaa leh qaab saddex-geesood ah oo wadnaha-qaabeeya ama ovoid. Iyadoo ay ku xiran tahay qaybaha hoose, waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo ficil ahaan loo yaqaan pubescence daciif ah ama leathery, oo dherer leh jinsiga jaallaha ah ee ka hooseeya. Ubaxyada waa casaan dhexdhexaad ah ama midab leh oo guduud ah ama midab buluug ah oo midab leh oo leh lafo madow. Isku-uruurinta burushka corytope ee 7-15 ubax. Kusoo dhawow qeybta hore ee xagaaga. Dhamaadka ubaxu waxay u muuqdaan sanduuq cylindrical ah ilaa 80 cm oo dhererkeedu yahay 5-6 mm oo keliya oo ballaaran, kaas oo hoos udhaca dhamaadka. Bartamaha waxaa ku jira miro yar oo qoyan oo dhererkiisu yahay 9 mm dheer iyo 2.5 mm ballaaran.
Ma taqaanaa? Khubarada yurub waxay kala saaraan noocyada noocyada kala duwan - Duclos. Waxay leedahay caleemo dhaadheer oo aan lahayn wax pubescence ah da 'yar. Ubaxyadu wax yar bay ka yaryihiin waxayna leeyihiin dhibco guduudan oo hooseysa. Si kastaba ha ahaatee, Botanistayaasha ka yimaadda Shiinaha waxay door bidaan in ay u gudbiyaan aragtida guud.
Qiyaastii 2 kun oo sano ka hor, noocyada noocan ah waxaa loo keenay Japan oo ka yimid Shiinaha, halkaas oo ay noqotay meel lagu dhajiyo dhirta Buddhist. Sanadkii 1849, wuxuu ka yimid Japan si Europe. Catalpa cirridku waa geed ilaa 15 mitir oo dherer ah, oo leh taaj sarajoog ah. Laamaha qashinka ayaa la daboolay caleemaha ovoid ilaa 25 cm dhererka, inta badan waxay leeyihiin 3 ilaa 5 calaamadood. Saldhigga caleen waa qalbi-qaabeeya, halka dhamaadka la tilmaamay. Petioles waxay u koraan ilaa 15 cm dhererka. Midabka caleemuhu waa mid hooseeya oo cagaar ah oo leh qoyaan aan dhicin oo xididdada ka mid ah, iyo midabka sare waa cagaar. Muuqaal muuqaal ah - wax aan caadi ahayn, sida catalps, ubax yaryar. Ku koraan illaa 2 cm, waxay leeyihiin midab huruud ah, xargaha jilicsan iyo dhar cadaan ah. Waxay muuqdaan July-August, ka dib markii taas oo ay iyaga oo la aasaasay midhaha miraha ilaa 30 cm dhererka iyo 0.8 cm width. Hase yeeshee, dalalkeena lama xiri karo, haddii ay muuqdaan, ma haystaan ​​wakhti ay ku qancaan. Sidaa darteed, catalpa this in our leeyahay kaliya dhalmada dhirta. Xaaladaha ku haboon, waxay ku jiri karaan xitaa sanadka ugu horeeya ee nolosha. Aagga dhexe, waxaa la koray sida caadiga ah sida geed, marar dhaadheer ah geed ilaa 5 m dhererka, inta badan barafoobay. Xuduudaha Bariga Dhexe, xitaa khafiifinta ayaa awood u leh inay midho u dhasho. Meesha kaliya ee geedku gaadho qiyaasta dabiiciga ah waa xeebta Badda Badda.
Waa muhiim! Horumar geedo of catalpa ee dhulka u furan, waa wax aan loo baahnayn in biqil abuurka lagu koriyo. Xaaladaha maxaliga ahi way ka duwan yihiin kuwa ku jira goobta banaanbaxa, dhirta si deg-deg ah ayay ugu habboon tahay xaaladaha ay ka korodhay "laga soo bilaabo caruurnimada."
Geedka noocan ah ayaa kori doona ilaa 20 m dhererka, sameynta taajaji ballaaran oo lagu faafiyo laanta faafidda. Waxay ku daboolan yihiin ballaaran ilaa 15 cm ballaaran iyo caleemo 20 cm, oo leh midab cagaaran iyo pubescence yar.
Duufaan cad oo cirif leh ayaa ku dhejisan laba jibbaar jaale ah iyo baalalado bunni ah. Muddada ubaxku waa 25 maalmood. Waxaa lagu daboolay ubaxyo badan hal mar sanadkii. Marka la dhammeeyo, miraha waxaa la aasaasay qaab ah sanduuqyo cidhiidhi ah. Geedku wuxuu jecel yahay meelo qorrax leh oo aan lahayn wax qabad iyo dabayl. Wuxuu jecel yahay carrada yar oo acidic ku dheggan Bacriminta organic. Gobollada koonfureed, geedka waa in la waraabiyo had iyo jeer, iyo ka dib markii la waraabiyo, loosen iyo mulch ciidda agagaarka jir. Waxay u dulqaadanaysaa manjooyin, ka dib markii taas oo si xoog leh u bilaabi caleemo cusub. Waxay u muuqataa qurux quruxsan oo leh kooxo leh magnolias iyo oaks. U qalmida labada koox iyo hal-abuur oo abuur ah oo loogu talagalay sameynta hareeraha iyo beeraha waddada.
Catalpa waxay ku taallaa waddooyinkayaga dhowr nooc. Dhirta orodka iyo dhirta kulaylka jecel waa la kori karaa oo kaliya koonfurta laakiin sidoo kale gobollada waqooyiga.
Caleemo aan caadi ahayn oo badani waxay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan, oo ay ku xiran yihiin ubaxyo qurxoon, qurux badan oo leh jajab kala duwan iyo xoqan. Daryeelka haboon, geedku wuu awoodaa in uu hor istaago dhirta daran. Wanaagsan jidadka beerta iyo qurxinta beerta.